बालेनलाई भोट किन दिएको?
टिप्पणी सरला गौतम
बालेनलाई गीत गाउने केटो, चश्मा लाउने केटाकै रूपमा हेरिरहे। उनले कोरोनाकालमा गरेका कामहरूको नजर अन्दाज गरिरहे। फोहोर व्यवस्थापनदेखि सम्पदा संरक्षणमा उनका योजना र विचार सुन्नै चाहेनन्। सुने पनि नसुने जस्तो गरिरहे।
कसले खोस्दै छ मान्छे रोज्ने हाम्रो अधिकार?
भरतपुरकै एक मतदाता महिला 'आफ्नै मान्छे काटेको पार्टीलाई कसरी भोट' हाल्ने भन्दै छिन्। कांग्रेस र माओवादी मिलेको उनलाई मन परेकै छैन। मन नपराउन नपाउने? नागरिकको मतअधिकारसँग दलतन्त्रले गरेको नमीठो ठट्ठा हो गठबन्धन।
‘समय तब बदलिन्छ, जब हामी समयलाई बदल्न अघि बढ्छौं’
"महिलाहरूले आन्तरिक रूपमा पितृसत्ता र आफ्नो हकअधिकारको लागि राज्यसत्तासँग एकै समयमा लड्नुपर्छ। घरभित्रको जेल तोड्नु पनि छ, आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको सवाल पनि छ। तर, महिलाहरूको लडाइँले धेरै ठूलो हल्लाखल्ला गर्दैन, यसै कारण मानिसको ध्यान तान्न मुश्किल हुन्छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन यसै हराउँछ।"